ယနေ့လူငယ်နှင့်စာပေအနာဂတ် | ဥက္ကာကိုကို
ယနေ့လူငယ်နှင့်စာပေအနာဂတ်	Posted by oakkarkoko on November 5, 2009
Posted in: ဆောင်းပါး.	Tagged: စာပေ.	Leaveacomment
““ဦးရွှေအောင်တဲ့ … တစ် ခါမှ မကြားဖူးဘူး””
စာပေလောက စာအုပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင်အတွင်း စာအုပ်ရွေးနေ သောကောင်မလေးတစ်ဦးကစင်ပေါ်ရှိ စာအုပ်တစ်အုပ်မှ အမည် ကြည့်ကာ
အဖော်ကောင်မလေးကို ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘေးမှ အဖော်ကောင်မလေးကလည်းအားကျမခံပြန်ပြောလိုက်သည်။
““စာရေးဆရာ အသစ်နေမှာ ပေါ့””ဟု။
တကယ်တော့ ဦးရွှေအောင် မှာ ဘာသာရေးစာပေများရေးသား ခဲ့သောစာရေးဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ် သည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်လေးများ စာ အုပ်ဝယ်ရန်သွားစဉ်
မြင်တွေ့ခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက် တစ်ဦးက ပြောသည်။တိုးတက်လာသည့်နည်းပညာ ခေတ်ကြီးတွင် တချို့သော လူငယ် များက
စာအုပ်စာပေအပေါ် အာရုံ စိုက်မှုသိသာစွာ လျော့ပါးလာနေ သည်ဟုစာပေအသိုင်းအ၀ိုင်းမှစာ ရေးသူများက ပြောကြသည်။
““တခြား ဖျော်ဖြေမှုတွေများ လာတာရယ်၊ စားဝတ်နေရေး အ တွက်
အချိန်ပေးရတော့စာပေဖက် ကို အချိန်မပေးနိုင်ကြတာလည်း ပါတယ်။ ဗီဒီယိုတို့၊ကက်ဆက်တို့၊ အင်တာနက်တို့လို တခြားဖျော်ဖြေ ရေးနဲ့ နည်းပညာတွေ အရမ်းများ
လာတော့ ခံစားမှုဖြစ်တဲ့စာပေတွေ အရမ်းကျသွားတယ်။ တချို့လူငယ်တွေကျတော့လည်း ဘ၀တွေက မ အားဘူးလေ။ ကိုယ့်ဝါသနာကိုပဲ ကြားထဲမှာဖြတ်ယူကြရတယ်””ဟု စာရေးဆရာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ချမ်းမင်းအိမ် က ပြောသည်။
ယခင်ခေတ်က ဗဟုသုတရှာ မှီးချင်ပါက စာအုပ်စာပေထဲတွင် ရှာကြရပြီး၊ယခုခေတ်တွင် ပုံနှိပ် စာပေတစ်ခုတည်းတွင်မကဘဲနည်း
ပညာသစ်များကိုအသုံးပြုပြီး ဗဟု သုတရှာဖွေ၍ရလာသည့်အတွက် ပုံနှိပ်စာပေမှာယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီဟု ဆိုကြသည်။လူငယ်များအနေဖြင့်လည်း နည်းပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုသာ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြ ကြောင်းပန်းဆိုးတန်းရှိ စာပေ လောကစာအုပ်အရောင်းဆိုင်မှသိ ရသည်။လူငယ်ဈေးကွက်အတွင်း ဒုတိယအရောင်းရဆုံးမှာတက်ကျမ်း စာပေများဖြစ်ပြီး၊အတ္ထုပတ္တိစာအုပ်များကတတိယနေရာယူထားကြောင်း သိရသည်။ရသစာပေနှင့် ဘာသာရေး စာပေတို့မှာလူငယ်များဝယ်ယူဖတ် ရှုမှု
ပုံမှန်သာရှိနေသည်ဟု စာအုပ် ဆိုင်များက ဆိုကြသည်။ ယခု နောက်ပိုင်းတွင်
ဘာသာရေးဆိုင် ရာစာအုပ်များ အနည်းငယ်ရောင်း ချလာရသည်ဟု ဆိုသည်။
““လူငယ်တွေ အများဆုံးဝယ် တာက နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ အင်္ဂလိပ်စာ
စာအုပ် တွေ၊ပညာရေးစာအုပ်တွေကိုတော့ အ၀ယ်များတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ
ဘာသာရေးစာအုပ်တွေလည်း အ ရင်ကနဲ့စာရင် ပိုဝယ်လာကြတယ်”” ဟု
အင်းဝစာအုပ်တိုက်မှ ကိုမောင်မောင်လွင်က ပြောသည်။
ရသစာပေမှာ လူငယ်များ အာရုံစိုက်မှုနည်းပါးနေပြီး ရသစာ ပေထက် ဟာသစာပေကို
ပိုနှစ် သက်ကြကြောင်း သိရသည်။
““ရသစာပေမှာက လူငယ်တွေ အနေနဲ့ ရောင်းအားလေးနေတယ်။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစအရွယ် ၁၅၊ ၁၆ နှစ်က ၂၅ နှစ်လောက်အထိ ကာတွန်းနဲ့
ဟာသစာပေတွေကို လည်း ဖတ်ကြတယ်။ ၃၀ ကျော် အရွယ်လောက်ဆိုရင်တော့ ဗဟု
သုတစာပေတွေဖတ်လာကြပြီ၊ လူ ငယ်တွေက IELTS,TOEFL လို စာအုပ်တွေ၊
နိုင်ငံခြားပညာသင် သွားဖို့အတွက် အင်္ဂ်လိပ်စာအုပ် တွေ ၀ယ်ဖတ်ကြတယ်”” ဟု
အမေ့ အိမ်စာပေမှ ဦးညီညီက ပြောပြ သည်။
““ရွေးချယ်စရာတွေ အရမ်း များလာတယ်။ လူတွေက နေ့စဉ် မွန်းကျပ်မှုထဲမှာ
ထွက်ပေါက်ရှာ လာကြတယ်။ လေးပင်တာတွေ ခေါင်းထဲမထည့်နိုင်ကြဘူး။ ဟာသ ကို
ဦးစားပေးလာကြတယ်။ စာများ များနဲ့ ရသပါတဲ့ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း တွေက
စာရေးတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်း လောက်ပဲ ကွက်ကွက်လေးကြိုက် ကြပြီး
ပရိသတ်အကြိုက်တော့ရှုံး ကြတယ်။ အရုပ်တွေ၊အရောင်တွေ များတဲ့
ဖျော်ဖြေရေးဂျာနယ်၊ မဂ္ဂ ဇင်းတွေက ရှေ့တန်းရောက်လာ တယ်””ဟု
စာရေးဆရာမသွေး(စစ် ကိုင်း)က ပြောသည်။
သို့သော် စာအုပ်စာပေဈေး ကွက်၏ ရောင်းအားကို လူငယ်ထု က
ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး နေရာ ယူထားသည်ဟု စာအုပ်အရောင်း
ဆိုင်အားလုံးလိုလိုက တညီညွတ် တည်း ပြောကြသည်။
လူငယ်များသည် စာပေအား အသုံးချပညာအနေဖြင့် ကိုယ်အ သုံးဝင်မည့်
ပညာရပ်စာပေမျိုးကို ပို၍အဖတ်များလာပြီး အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိအောင်
ရွေးချယ်သုံးစွဲလာ ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
““ဒီခေတ်မှာ နည်းပညာသစ် တွေကြောင့် အင်တာနက်ထိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာမှာ
စာဖတ်လို့ရနေပြီ။ ဂျာနယ်တွေဖတ်နေရင်တောင်ဗဟု သုတ အချက်အလက်တွေ ရနေ ပြီ။
ဒါကြောင့် ရသစာတွေ၊ စာကြီး ပေကြီးတွေ ရှာဖွေဖတ်ရှုခံစားတဲ့ နေရာမှာ
သူ့ခေတ်သူ့အခါအရ အားနည်းသွားကြတယ်။ ဒါသဘာ ၀ကျပါတယ်”” ဟု အခမဲ့ပညာဒါန
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ နေသူ ကဗျာဆရာ ဆူးသစ်နီက သူ့အမြင်ကို
စာအုပ်များ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့် ခြင်းနှင့် စာအုပ်ငှားရမ်းခဈေးကြီး
တကယ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေဆို ကိုးထောင်၊ တစ်သောင်းလောက်ရှိ နေတော့
အစ်မတို့တောင် ဖတ်ချင် ပေမယ့် ၀ယ်မဖတ်နိုင်တာတွေရှိ တယ်။ စာအုပ်ငှားခထက်
ဗီစီဒီခိုး ကူးတာပိုဈေးပေါသလိုဖြစ်နေတော့ E. Media ကိုပဲ ရွေးချယ်လာကြ
တာများတယ်””ဟု လူငယ်စာရေး ဆရာမတစ်ဦးက မြင်သည်။
နည်းပညာခေတ်တွင် လူငယ် အများစုမှာ စာအုပ်စာပေပုံနှိပ်မီဒီ
ယာဖတ်အားနည်းသွားခြင်းကိုလည်း ခေတ်၏ ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်ဖြစ် သောကြောင့်
အပြစ်မြင်၍မရ ကြောင်း လူကြီးတချို့က သုံးသပ် ကြသည်။
““တိုးတက်တဲ့ခေတ်ဖြစ်လာ၊ နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ လူငယ်တွေက
စာပေတစ်ခုတည်း ကို အာရုံစိုက်လို့မရတဲ့အတွက် စာ ပေအပေါ်မှာ အားလျော့သွားတာ
ကိုလည်း အပြစ်မြင်လို့မရပါဘူး”” ဟု ပန်းချီဆရာ ဦးအောင်ခိုင်က ပြောလာသည်။
ပုံနှိပ်စာပေကို စိတ်မ၀င်စား သော လူငယ်များရှိသကဲ့သို့ စာပေ အပေါ်
ယုံကြည်တပ်မက်သောလူ ငယ်များစွာလည်း ရှိနေပေသေး သည် ။
““စာဖတ်တာ ၀ါသနာပါ တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စဖတ် တယ်။ကလေးစာပေအစုံဖတ်တယ်။
နည်းနည်းကြီးလာတော့ ရသပိုင်း ပိုဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဘာသာပြန်ဖတ် တယ်။
သုတပိုင်းအားနည်းတယ်။ ဘ၀စရိုက်တွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့
ရသပိုင်းကိုပိုကြိုက်တယ်””ဟုကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သော ၂၄ နှစ် အရွယ်
ယခု အလုပ်တစ်ဖက်နှင့် ဖြစ် ၍စာအုပ်အနည်းငယ်သာဖတ်ဖြစ် နေပြီး
နိုင်ငံရေးနှင့် သမိုင်းကြောင်း ဆိုင်ရာ စာအုပ်များလည်း ဖတ် သည်ဟု မဝေေ၀က
ရန်ကုန်လူငယ်များကတော့ နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ကာ အင်တာ နက်ကြည့်ရင်း
အချိန်ကုန်တာများ ပြီး စာအုပ်ကို တစ်လတစ်အုပ်ပင် မဖတ်ဖြစ်ကြောင်း
““ကျွန်တော်တို့လည်း အင် တာနက်ပေါ်က မေးလ်တွေဖတ်၊ ဖော်ဝါ့ဒ်မေးလ်တွေထဲက
ဖတ် ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတွေဖတ်ရင်း ပဲ အချိန်ကုန်သွားတာ၊ အင်တာ
နက်ပေါ်မှာလည်း ဖတ်ကောင်းတဲ့ ရသစာပေတွေရှိပါတယ်။ သေချာ တာကတော့
စာအုပ်မဖတ်ဖြစ် တော့တာပါ။ နေ့စဉ် အင်တာနက် ကြည့်ရုံနဲ့
အချိန်ကုန်သွားတာလေ”” ဟု အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ပရိုဂ ရမ်မာကိုမိုးထွန်းက
ဂျီတီစီ ပထမနှစ်ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုစိုင်းကျော်သူ ကလည်း
စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်သည့် အကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြသည်။
““စာမဖတ်ဘူး၊ အခုခေတ်မှာ တချို့အသိအမြင်တွေက စာဖတ်မှ ရတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
လက်တွေ့ မှာဖြစ်နေတာတွေက အရမ်းမြန် လွန်းတော့ စာဖတ်ပြီးရတာတွေက
တချို့နေရာတွေမှာ အသုံးမ၀င် တော့ဘူး။ရသစာပေမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ ၀တ္ထုတွေဖတ်ဖို့
အချိန်မရှိဘူး။အင် တာနက်ပေါ်မှာလည်း ဖတ်လို့ရ တာပဲ။ ကျောင်းသွားတဲ့အချိန်
သူ ငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်တွေ နဲ့ စာအုပ်ဖတ်ဖို့ အချိန်လည်း မရှိ
ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်များ စုဆောင်း ပြီး တခြားသူများကိုပြန်လည်ငှား
ရမ်းပေးနေသူ ကိုလင်းလင်းက လည်း စာအုပ်ဖတ်ချင်သော်လည်း
““ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်စာ အုပ်စုထားတာ အုပ်ငါးရာလောက် ရှိတယ်။
အိမ်မှာက ဈေးဆိုင်ဆို တော့ ဈေးလာဝယ်တဲ့သူတွေကို
စာအုပ်စာရင်းအိမ်ရှေ့မှာကပ်ထား ပြီး ငှားပေးတယ်။ လူငယ်တွေ အ
ငှားများတယ်””ဟု အသက် ၂၅ နှစ် အရွယ် လှိုင်မြို့နယ်တွင်နေသူ ကို လင်းလင်းက
သူ့ဆန္ဒကို ပြောပြ သည်။
စာအုပ်အငှားဆိုင်များတွင် လူငယ်များသာ အငှားများကြပြီး
ယခုနောက်ပိုင်းတွင်မူလူငယ်ကြိုက် သီးသန့်စာအုပ်များ တင်ပေးသော် လည်း
စိတ်မ၀င်စားကြတော့ဘဲ အင်တာနက်ဆိုင်များဆီသာ ခြေ လှမ်းလှည့်သွားကြကြောင်း
ဒေါပုံ မြို့နယ်မှ ရပ်ကွက်စာအုပ်အငှား ဆိုင်တစ်ခုက ပြောသည်။
ရန်ကုန်လူငယ်တချို့မှာ နည်း ပညာနှင့်ထပ်တူ ပြေးလွှားနေကြ
သူများဖြစ်သည့်အတိုင်း စာပေ၀ါ သနာပါသော်လည်း ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂ ဇင်း၊
စာပေနယ်ထဲသို့ တိုးဝင်ရန် စိတ်မကူးကြတော့ဘဲအလွယ်တကူ
ရေးသားတင်ဆက်၍ရနေသည့် အွန်လိုင်းပေါ်၌သာဘလော့ဂါများ အဖြစ်
စာပေနယ်ပယ်ထဲသို့ ထိုး ဖောက်ဝင်ရောက်နေကြသောလူ ငယ်စာပေသမားအများစုမှာ
နယ် ဒေသအသီးသီးမှ ဖြစ်ကြောင်း စာ ရေးဆရာများက ပြောကြသည်။
နည်းပညာတိုးတက်နေသည် ဆိုသော အနောက်နိုင်ငံများတွင် ပင် ခရီးသွားရင်း၊
အားလပ်ချိန်အ ပန်းဖြေရင်း စာဖတ်သည့်အကျင့် များရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ယနေ့အချိန် ထိ စာဖတ်အသင်းများလည်း ရှိနေ ဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်
စရာများ၍၊ အလုပ်များ၍ စာဖတ် ချိန်မရဆိုသည်မှာ အကြောင်းပြ
ချက်များဖြစ်ကြောင်း စာဖတ်ဝါသ နာရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ လက်
တွေ့မကြုံရသည်များကို စာတွေ့ ဖြင့်လေ့လာမှတ်သားနိုင်၍ စာဖတ်
သည့်အလေ့များမြန်မာလူငယ်များ ကြား ပျောက်မသွားစေလိုကြောင်း သူက
( ဥက္ကာကိုကို ရေးသား၍ မြတ်စုမွန်၊ အိဖြူလွင်၊ သိမ့်သိမ့်စိုး၊ ဗိုလ်ဗိုလ်ဝင်းပံ့ပိုးသည်။)
7Day News ဂျာနယ်၊ အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၃၃)။
← သေတာတောင်လွဲဖြစ်အောင်လွဲသွားသူ(သို့မဟုတ်)နီကိုရဲ	အတွေးမီးခိုးများ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...